दाङमा आलोचना बढी स्वागत कम, महानगर बनाउने प्रदेश नीति - Pradesh Today
Homeमुख्य खबरदाङमा आलोचना बढी स्वागत कम, महानगर बनाउने प्रदेश नीति
दाङ, ४ असार । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगर जोडेर महानगर बनाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीतिमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले आलोचना गरेका छन् । उपमहानगर–पालिकाको संस्थागत विकास नहुँदै र उपमहानगर–पालिकाकै मापदण्ड र सुविधा नपाई रहेका जनतालाई महानगर थुपार्ने नीति गलत भएको दलहरूको तर्क गरिरहेका छन् भने नागरिकस्तरबाट विरोध र आलोचना आउन सुरू गरेको छ । उपमहानगरका मेयरहरूले निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
दाङमा महानगरपालिका बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरेपछि जिल्लामा महानगरको विषयलाई लिएर टिक्का टिप्पणी सुरू भएको छ । प्रदेशका प्रमुख तीन शहरी क्षेत्रहरू बुटवल–भैरहवा, नेपालगंज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९को वार्षिक बजेट विनियोजन गरेपछि जिल्लामा आलोचना र समर्थन सुरू भएका छन् ।
बिना पूर्वाधारको घोषणाले मात्र महानगर बन्न नसक्ने भन्दै लोकप्रियताका लागि यो आवश्यक नभएको बताइरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै नागरिक र विपक्षी राजनैतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिकाटिप्पणी र आलोचना गरिरहेका छन् ।
दाङमा महानगरपालिका बनाउने सरकारको घोषणा पूर्णरूपमा बेठिक भएको नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्काले बताए । गाउँपालिकाको जस्तो स्तर भएका संरचनाले महानगर बनाउन खोज्नु भनेको खोक्रो प्रचारबाजी मात्रै भएको मुख्यमन्त्री माथि टिप्पणी गरेका छन् । उनले महानगरको नाटक गरेर जनताबाट चर्को कर असुली गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले १५ सय मिटरको सडकले मात्र महानगर बनाउन नसकिने बताए । उपमहानगर बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म भौतिक पूर्वाधार, नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, आधारभूत विकास लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको विकास नभएकाले अहिलेका संचरनामा महानगरको क्षमता नभएको उनी बताउँछन् ।
उपमहानगर हुँदा त जनताले कर तिर्न सकेका छैनन्, अब महानगर बनाएर फेरी जनतालाई करको भार बोकाउने ? काम गर्ने केही होईन, मुसोसम्म मार्न सक्ने होईन, त्यसै सस्तो लोकप्रियताका लागि विदेशी भाषण गरेर हुन्छ ?
उपमहानगर हुँदा त जनताले कर तिर्न सकेका छैनन्, अब महानगर बनाएर फेरी जनतालाई करको भार बोकाउने ? उनले भने– ‘काम गर्ने केही होईन, मुसोसम्म मार्न सक्ने होईन, त्यसै सस्तो लोकप्रियताका लागि विदेशी भाषण गरेर हुन्छ ?’
आगामी दश वर्ष पछिमात्रै उपमहानगरलाई परिमार्जन गरेर महानगर बनाउनु सबैका लागि उचित हुने उनको भनाई छ ।
‘महानगर बनाउने लक्ष्य त हो, तर अहिले कसरी ?’ उनले भने– ‘जनता आत्मनिर्भर भएको खोई, पूर्णरूपमा सबै क्षेत्रमा सहरीकरण भएको खोई ? शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, सेवा सुविधामा सबै जनताको पहुँच खोई ? त्यसै हुन्छ महानगर ?’ ‘सडकका बीचमा भैँसी खाल बस्ने खाडल पुर्न नसकिरहेको अवस्थामा महानगरको नाटक गर्नु गलत हो’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस दाङका जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले उपमहानगरलाई परिमार्जन गरेर महानगर बनाउनु तत्कालका लागि गलत भएको बताए । भूगोल एकीकरणले मात्र महानगर बन्न नसक्ने भएकाले पहिले संरचना तयार पारेर मात्र महानगरको योजना अगाडी ल्याउनुपर्ने बताए । तत्कालिन समयमा पनि नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्दागर्दै उपमहानगर बनाउँदा अहिले नागरिकले विना सेवा सुविधाको कर तिर्नु बाध्य भएको बताए ।
‘हामीले त्यो बेलामा उपमहानगर अहिलेको आवश्यकता होईन, बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गरेका थियौँ, तर जबरजस्त उपमहानगर बनाईयो’ उनले भने–‘उपमहानगर बनाएर जनताले के पाए ? अब महानगर बनाएर के पाउँछन् । उनले महानगरको बहानामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै भावी पिढीलाई सिध्याउने खेल भएको आरोपसमेत लगाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला सहइन्चार्ज निर्मल आचार्यले दाङमा महानगरपालिका आवश्यक भएको बताए । विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हुँ उनले भने । पहिलेदेखि नै महानगरको पक्षमा पनि छु । देशकै राजधानी बन्न लायक क्षेत्रमा गुरूयोजनासहितको महानगर बनाउने निर्णय जिल्लाबासीहरूका लागि अवसरको विषय भएको उनले बताए । अहिलेको अवस्थमा सरकार प्रचारमुखी काममा व्यस्त र आफ्नो दायित्वबाट हटेको हुनाले महानगरको विषयलाई लिएर जनतामा टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक भएको तर्क गरे ।
तर महानगर बनाउनका लागि पाएको अवसरलाई अस्विकार गरेमा जिल्लाबासीहरूलाई दूरगामी रूपमा नोक्सान पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले देखाएको व्यवहारका कारण जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुनु एकदम ठिक हो, त्यही व्यवहारले चुनावमा मत माग्न जाने बाटो समेत बन्द हुने अवस्थामा छ’ उनले भने– ‘तर महानगर बनाउने जुन योजना छ, त्यो त ठिक हो, भाँडो फराकिलो भयो भने पो त्यहाँ सामग्री भरिदै जान्छन्, भाँडो नै साँघुरो भयो भने कसरी सामग्री भरिन्छ ?’ सुरूवात गर्ने कुरालाई नराम्रो भन्न हुँदैन । विकास भए हाम्रै लागि हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुखहरूले भने महानगर बनाउने प्रदेश सरकारको नीतिलाई स्वागत गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगर बनाउने निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो भनेका छन, ‘उपमहानगर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भौगोलिक, अर्को साँस्कृतिक, अध्ययन भइरहेकै छ, अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा हुने महानगरपालिका ठिक छ, ठूला–ठूला मेघासिटी बनाउन महानगरपालिका चाहिन्छ ।’
यस्तै घोराही उपमहानगरका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले महानगर बनाउने सरकारको प्रयास सकारात्मक भएको बताए । पूर्वाधारको पहुँच नभएको ठाउँमा पहुँचमा पु¥याउने, विकास निर्माणका कामहरू हुने, ठूलो बजेट परिचालन हुनेजस्ता कामहरू महानगरले नै गर्ने भएकाले सरकारको यो प्रयास सकारात्मक भएको उनको भनाई छ ।